Bilbila Ammayyaawaa - Smart Phones - OROMO ICT
December 29, 2017 Healthy Related, Odeeffannoo, SMART PHONEAbdisa Bencha Jara
‘SmartPhone’ – Dr Nuredin Luke
~ Ifni moobayilafi meeshalee ‘electronics’ keenya irraa ifu qaama ija keenyaa reetinaa kan jedhamu miidha. Guyyatti sa’aa hedduuf ifa kanaaf yoo of saaxille (keessatu galgala ykn yeroo dukkanaa) turtii yeroo dheeraan booda ijji keenya waan nu fuuldura jiru akka qulqullefattee hin argine godha.
~ Guyyatti sa’aa dheeraaf ifa kanaaf of saaxiluun turtii yeroo dheeraa booda moora ijaatiif nama saaxiluu danda’a jedhamee shakkama. Kun garuu waan hin qulqullofneefi qoratamaa jirudha.
~ Ifni kuni, sammuun keenya hoormoonii yeroo hirribaa maddisiisu kan ‘melatonin’ jedhamu haalan akka hin maddisifne godha. Kun ammoo hirriba keenya irratti miidha qaba. Hirriba gahaa argachuu dhabuun ammoo rakkinna fayyaa birootiif nama saaxila. Kanaaf sa’aa rafuuf deemnutti fayyadamuu dhabuun gaarii ta’a.
~ Hoormoniin ‘melatonin’ jenne kun carraa kaansarii tokko tokkoon qabamuu gadi buusa. Hanqinni hormooni kana ammoo carraa kaansarii tokko tokkon (harmaa fi pirosteetii fa’an) qabamu ol kaasuu danda’a. Akka qorannoon tokko tokko mul’isutti hirriba gahaa argachuu dhabuunis carraa kaansariin hubamu ol kaasa.
~ Akkasumas yeroo dheeraaf ifa kanaaf of saaxiluun hanqinna hirribaa wojjiin wolqabatee fayyaa sammuu keenya irratti miidhaa fida. Muukuuf (Depression) fa’aaf nu saaxiluu danda’a.
← Ergaa(E-mail) sobaafi deetaa keenya basaasuu dhufu akkamitti Beekna?	Dhaabbanni Fesbuukii oduu Fesbuukiirra mul’atan irratti jijjiirama godhuufi. →
Total Hits : 514603